Ahoana ny fomba hanampiana ny fahafahanao misafidy ho mpiara-miasa amin'ny fivarotana fivarotana anao
Talata, Aogositra 3, 2021 Talata, Aogositra 3, 2021 Douglas Karr
Aza omena ny masoivohonao mihitsy ny fahazoanao miditra. Betsaka loatra ny zavatra mety tsy mandeha rehefa manao izany ianao - manomboka amin'ny teny miafina very ka hatramin'ny fahazoana miditra amin'ny fampahalalana tsy tokony hananan'izy ireo. Ny ankamaroan'ny sehatra ankehitriny dia manana fomba hanampiana mpampiasa na mpiara-miasa amin'ny sehatra misy anao mba hahafahan'izy ireo manana fetra voafetra ary azo esorina raha vantany vao vita ny serivisy. Shopify dia mahomby amin'ny alàlan'ny fidiran'ny mpiara-miasa aminy
Subbly: Mandrosoa ny serivisy boaty fisoratana anarana miaraka amin'ity sehatra Ecommerce ity
Alatsinainy Aprily 19, 2021 Alatsinainy Aprily 19, 2021 Douglas Karr
Fahatezerana lehibe hitantsika amin'ny ecommerce dia ny fanomezana boaty famandrihana. Ny boaty mpanjifa dia tolotra mahaliana… manomboka amin'ny kitapo fisakafoanana, vokatra fanabeazana ho an'ny ankizy, hatramin'ny fitsaboana alika… mpanjifa am-polony tapitrisa no misoratra anarana amin'ny boaty famandrihana. Ny fanamorana, ny maha-izy azy, ny zava-baovao, ny fahagagana, ny exclusivité ary ny vidiny dia toetra mampiavaka ny varotra boaty famandrihana rehetra. Ho an'ny orinasa ecommerce mamorona, ny boaty famandrihana dia mety ahazoam-bola satria manova ny mpividy indray mandeha ho mpanjifa miverimberina ianao. Ny tsenan'ny eCommerce fisoratana anarana dia mendrika
Alakamisy Janoary 14, 2021 Alakamisy Janoary 14, 2021 Douglas Karr
Raha orinasam-pandraharahana nizarana angon-drakitra amin'ny rafitra marobe ianao, dia saika ilaina ny Customer Data Platform (CDP). Matetika ny rafitra dia natao ho an'ny fizotran'ny orinasa anatiny na ny mandeha ho azy… fa tsy ny fahaizana mijery ny hetsika na ny angona manerana ny dian'ny mpanjifa. Talohan'ny nidiran'ny Customer Data Platforms teny an-tsena, ny loharanom-pahalalana ilaina amin'ny fampidirana sehatra hafa dia nanakana ny firaketana ny fahamarinana iray izay ahitan'ny olona rehetra ny fikambanana ny hetsika manodidina